အပြင်နတ် (၃၇)ပါးတွင် ပါဝင်သော တောင်ပြုန်းညီနောင် နတ်နှစ်ပါးကို ပူဇော်ပသသောအားဖြင့် ပွဲတော်ကို နှစ်ဉ် ကျင်းပကြသည်။ မန္တလေးခရိုင်၊ မတ္တရာမြို့နယ် တွင်ရှိ၍ တောင်ပြုန်းရွာသည် မန္တလေးမြို့မြောက်ခြမ်းမှ မြောက်ဖက်သို့ (၁၅) ကီလိုမီတာ အကွာတွင်တည်ရှိ၏။ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့် တောင်ပြုန်းသည် ပူအိုက် ခြောက်သွေ့၍ ဖုန်ထူသည်။ ၂၀၁၉ မတ္တရာမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များအရ ရွာနေထိုင်သူ သုံးထောင်ကျော်ရှိသည်။
ဆုတောင်းပြည့် နှင့် ဆုတောင်းရ စေတီနှစ်ဆူသည် တောင်ပြုန်းနတ်နှစ်ပါး နတ်နန်း၏ မြောက်ဖက်တွင် တည်ရှိသည်။ နတ်နန်းကို ပြသာဒ်နှစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထား၍ ပထမပြသာဒ်တွင် နတ်ရုပ်အချို့တည်ရှိရာ တောင်ပြုန်းမင်းရုပ်တုနှစ်ခု၊ မနှဲလေးရုပ်တုနှင့် မန္တလေးဘိုးဘိုးကြီးရုပ်တုတို့ ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်၌ ဒုတိယပြသာဒ်သည် ချိုးရေတော်သုံးပွဲအတွက် အသုံးပြုကြသည်။ ဤနတ်နန်းနှင့် ပရဝုဏ်ကို နတ်ထိန်းဟုခေါ်သော မိသားစုတစ်စုမှ ပိုင်ဆိုင်သည်။
ပင်မမဟုတ်သော နတ်နန်းများလည်း တည်ရှိကြသည်။ ရိုးရာအရ အဓိကနတ်နန်းကို ဝင်ခွင့်မရသော နတ်ကတော်များအတွက် ထိုနတ်နန်းများကို ၁၉၈၀နှစ်များအလယ်လောက်မှ စတင်၍ တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။[မှတ်စု 1].
ရှေးသထုံနေပြည်တော်အနီး မွတ်စလင်ကုန်သည်များ ခရီးနှင်လာသော သင်္ဘောပျက်၍ ထိုအထဲမှ ညီအကိုနှစ်ဦးသည် ပျဉ်တစ်ချပ်ကို တွယ်ဖက်ရင်း သထုံသို့ မြော၍ရောက်ရှိလာသည်။ ထိုညီအကိုနှစ်ဦးမှာ ဗျတ်ဝိနှင့် ဗျတ္တ ဖြစ်၏။[မှတ်စု 2] ကမ်းသို့ကပ်သော် ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ခိုလှုံနေထိုင်ကြ၏။ ထိုကျောင်း၏ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်မှာ သထုံဘုရင် မနူဟာမင်း ကိုးကွယ်သော် ဆရာတော်ကြီးလည်း ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် ညီနောင်နှစ်ဦးကို သံယောဇဉ်ရှိ၍ စောင့်ရှောက်ကာ အပါးတွင် ထားလေ့ရှိသည်။
ညီဖြစ်သူ ဗျတ္တသည် ပုဂံသို့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့၍ အနော်ရထာမင်းထံ ခိုလှုံအမှုထမ်းရွက်သည်။ ဗျတ္တ၏ ထူးကဲသော စွမ်းအားများကြောင့် ပန်းတော်ဆက် ရာထူးခန့်အပ်၍ တောင်ဖက် မိုင်သုံးဆယ်ခန့်ကွာသော ပုပ္ပါးတောင်မှ နေပြည်တော်သို့ နေ့စဉ် ပန်းဆက်စေသည်။
ဘုရားစေတီပြီးလျှင် အနော်ရထာက စစ်ဆေးကြည့်ရှုရာ စေတီ၌ အုတ်နှစ်ချပ်လပ်သည်ကို မြင်၍မေးလေရာ မင်းချင်းတို့က ရွှေဖျဉ်းညီနောင်မှာ ဘုရားတည်ရန် လုပ်အားအကူမပေးဘဲagame of marbles ကစားနေကြောင်း လျောက်တင်ကြသောအခါ ပြစ်ဒဏ်အနေဖြင့် ညီနောင်နှစ်ဦးကို ကြိမ်ဖြင့် ရိုက်စေသည်။ သို့သော် ကြိမ်တုတ်ဖြင့် ရိုက်မည့်အစား ဝါးရင်းတုတ်ဖြင့် ရိုက်ကြသည်။ ဖခင်ဖြစ်သူထံမှ စွမ်းအားများရရှိထားသောကြောင့် ထိုတုတ်ရိုက်ချက်များက အန္တရာယ်မဖြစ်ပေ။ နောက်ဆုံးတွင် ဝှေးစေ့ဖောက်ထုတ်၍ သတ်သည်ဟုလည်း အချို့စာများက ဖော်ပြကြသည်။
အဋ္ဌမရက် - ပခန်းမင်းပို့ပွဲ [မှတ်စု 3] (ဝါခေါင်လပြည့်)
နဝမရက် - ရွှေဘုံဆင်းပွဲ (ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁) [မှတ်စု 4]
နတ်ပွဲကို ဖွင်ရာတွင် နတ်များကို ကန်တော့ တိုင်တည်၍ ပြုလုပ်ကြပြီး ရက်အားဖြင့် ပထမနှင့် ဒုတိယရက်များတွင်ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်ကြေငြာသူအဖြစ် တာဝန်ယူသော နတ်ကတော်မှ နတ်သီချင်းများသီဆို၍ နတ်နှစ်ပါး၏ အထုပ္ပတ္တိများ ရွတ်ဆိုသည်။ ဆိုင်းဝိုင်းမှ တီးမှုတ်ကာ နတ်ဝင်ပူးသည်ဟု ထင်ဟန်ရှိသော နတ်ကတော်မှ သီချင်းဂီတအလိုက် ကပြသည်။ နတ်ကနားအကမှာ ပွဲတော်၏ အဓိကအခြင်းအရာဖြစ်ကာ ပွဲတော်အစအဆုံး ကျင်းပကပြကြသည်။ တတိယနေ့သည် တရားဝင်အားဖြင့် ပွဲတော်၏ အစနေ့ဟူ၍ဆိုကြသည်။ ယင်းနေ့၏ ညပိုင်းတွင် 'ညညီလာခံပွဲ'ကို ကျင်းပ၍ ဆိုင်ရာ ရိုးရာဓလေ့များ လုပ်ဆောင်ကြပြီး နတ်ကနားများကပြကြသည်။
စတုတ္ထနေ့၌ ကျင်းပသည်မှာ ချိုးရေတော်သုံးပွဲဖြစ်၍ တောင်ပြုန်းနတ်နှစ်ပါး၏ နတ်ရုပ်တုနှစ်ခုကို ရေချိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအစီအစဉ်မှာ နတ်ရုပ်တုနှစ်ခုကို နတ်နန်းမှ ရေချိုးဆေးကြောပေးမည့်နေရာသို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်၍ ချိုးမည့်နေရာတွင် နတ်ရုပ်တုနှစ်ခုနှင့်တကွ ကွမ်းအစ် စသည့်အသုံးအဆောင်တို့ကို ဆေးကြောသန့်စင်ကြသည်။ အထူးဆောက်လုပ်ထားသော ဝေါတော်ကို စစ်ဝတ်တန်ဆာများဝတ်ဆင်ထားသော သူများကထမ်း၍ သယ်ဆောင်ကြသည်။ နတ်ထိန်းမှ ဦးဆောင်၍ လှည့်လည်သည်။ ယင်းနောက် နတ်နှင့်ပတ်သက်သော ဆိုင်ရာလူကြီးများ၊ တီခတ်ရန် ဂီတအဖွဲ့နှင့် နောက်မှနေ၍ ဘုရင့်စစ်တပ်ပုံစံနှင့်တူရန် ဝတ်စားထားသော မင်းချင်းများ ရှိသည်။ ချိုးရေတော်ပွဲလုပ်မည့် ပြဿဒ်သို့ရောက်လျှင် ဝေါတော်ကို အဝင်ဝ၌ထားရစ်၍ နတ်ထိန်းများက စင်တွင် ချိူးရေတော်အမှုဆောင်ရွက်သည်။ ယင်းနောက် နတ်ရုပ်များ၏ အဝတ်များလဲလှယ်ပေးကြ၍ အဖျော်ယမကာနှင့် အခြားပစ္စည်းများကို ပသကြသည်။ နတ်နန်းသို့ အပြန်တွင် တောင်ပြုန်ညီနောင်၏ ဘုရားကန်တော့သည့် အခမ်းအနားကို လုပ်ဆောင်ကြရာ ဝေါတော်ကို ဘုရားစေတီသို့ မျက်နှာမူ၍ အကြိမ်အချို့ ဦးတိုက်ကြ၏။ဤနေ့သည် အစီကားဆုံးနေ့ဟူ၍လည်း ဆိုကြသည်။
ယုန်ထိုးပွဲသည် တောင်ပြုန်းညီနောင်နှစ်ဦး အသက်ရှိစဉ်က ယုန်လိုက်သည်ကို အစွဲပြု၍ ကျင်းပသော ရိုးရာပွဲဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်ဦးသည် ယုန်လိုက်အမဲပစ်ရင်း ရွာတစ်ရွာမှ အိမ်တစ်အိမ်သို့ ရောက်ရှိလာကာ ထိုအိမ်၌ ခေတ္တနားနေကြသည်။ ထိုစဉ် အဖိုးအိုတစ်ဦးက[မှတ်စု 5] ၎င်းတို့ကို ယုန်ကင်နှင့် ထန်းရည်တို့ဖြင့် ဧည့်ခံခဲ့သောကြောင့် အပြန်အလှန်အားဖြင့် အဖိုးအိုကို ၎င်းတို့ရှိရာ တောင်ပြုန်းသို့ လာရောက်ရန် အလည်ခေါ်ခဲ့သည်ဟု ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များက ဆိုကြသည်။ ထိုမှသ၍ အဖိုးအို၏ မျိုးဆက်များ (အခြားဖြစ်နိုင်သည်မှာနတ်ရေကုန်းရွာမှ ရွာသားများ ) က ယုန်ကင် ပသရန် လာရောက်ခဲ့ကြသည်မှာ ယနေ့တိုင်အထိဖြစ်၏။
ဝါခေါင်လဆန်း (၁၃)ရက်တွင်[မှတ်စု 6] ကျင်းပကြကာ ပွဲတော်ရက်အားဖြင့် ခြောက်ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့တွင် နတ်ရေကုန်းရွာမှ ရွာကာလသားတစ်စုကို ရွာခံလူငယ်တစ်ဦးက ဦးဆောင်လာ၍ တင်လှူရန် ယုန်ကင်နှစ်ကောင်ကို ဘယ်တစ်ဖက် ညာတစ်ဖက်ကိုင်ဆောင်လာကာ နတ်နန်းသို့ ရိုးရာဓလေ့စီစဉ်မှုဖြင့် ပသသည်။ ယင်းအစီစဉ်တွင် ထိုအုပ်စုသည် နတ်နန်းကို လက်ဝဲရစ် ခုနှစ်ကြိမ်လှည့်လည်၍ ထိုသို့လှည့်လည်နေစဉ် မကြားဝံ့မနာသာ စကားများ အော်ဟစ်ဆဲဆိုကြ၏။ ထိုသူများဖြတ်သွားစဉ် နတ်ကတော်များမှာ ဆိုင်ရာအဆောင်အခန်းများမှ တံခါးများကို ပိတ်လေ့ရှိသည်။
ရာဇဝင်ပုံပြင်များအရ အနော်ရထာမင်းကို ကံကန်တော်မူစေသည်မှာ ထိမ်ပင်ကိုစောင့်သော နတ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၍ တောင်ပြုန်းမင်းညီနောင်နှင့်တကွ ဒေသခံများက ထိုထိမ်ပင်စောင့်နတ်ကို မကျေနပ်ကြောင်းပြသသည့်သဘောဖြင့် ထိမ်ခုတ်ပွဲကို ကျင်းပကြသည်။ ပွဲသည် တနည်းဆိုသော် ထိမ်ပင်စောင့်နတ်အား ကလစားချေသည့် ပြယုတ်ကို တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အပင်ကိုလည်း အသားမာပင်တစ်မျိုးဖြစ်သော ထိမ်ပင် (Nauclea parviflora) ဟူ၍ယူဆကြသည်။[မှတ်စု 7]. မှန်နန်းရာဇဝင်တွင် ရန်သူဖြစ်သော လိမ်ပင်စောင့်နတ်က သတ်သည်ဟူ၍ ဖော်ပြသည်။
ထိမ်ခုတ်ပွဲဟူ၍ အစဉ်အဆက်သုံးစွဲခဲ့ကြပြီး ဝါခေါင်လဆန်း (၁၄)ရက်တွင် ကျင်းပသည်။ သို့ရာတွင် တကယ့်ခုတ်သည့်အရာမှာ သစ်ပင်မဟုတ်ပေ။ သစ်ကိုင်းကြီးကြီးနှစ်ကိုင်းကို နတ်နန်းပရဝုဏ်၌ ကြိုတင်စိုက်ထား၍ ဆောင်ရွက်မည့်နေ့တွင် သစ်ကိုင်းပတ်လည်ရေလောင်းထားကာ နတ်နန်းမှ သက်ဆိုင်သူလူကြီးများက ဓါးကိုင် ထွက်ရှိလာ၍ ထိုကိုင်းများကို လှည့်ပတ်သည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့် နတ်အုပ်မှ တစ်ဦးတည်းရပ်နေပြီး ရုတ်တရက်သစ်ကိုင်းကြီးထိပ်ဖျားမှ ကိုင်းသေးတစ်ခုကို ခုတ်ကာ ခုတ်ထားသော ကိုင်းသေးကို ကိုင်ဆောင်ရင်း ခပ်သုတ်သုတ်ဖြင့် နတ်နန်းထဲသို့ ပြေးဝင်သွားသည်။ လူအုပ်ကြီးကလည်း ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကျန်ရှိနေသော သစ်ကိုင်းအပေါ် ခုန်ဝင်ကြပြီး ကိုင်းတစ် ရိုးတံတစ်ချောင်းလောက်ရစေရန် လုယက်ကြသည်။ သစ်ကိုင်းမှာ တမဟုတ်ချင်း အစိတ်စိတ် အပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွား၍ ထိုနေရာ၌ မရှိတော့ပေ။ ထိုလု၍ရသော သစ်ကိုင်းစသည် လာဘ်ကောင်းသည်ဟု အယူရှိကြပြီး လယ်ကွင်းတွင် မြှုပ်နှံပါက အထွက်ကောင်းသည်ဟုလည်း ယုံကြည်ကြသည်။
ပွဲတော်ကာလတွင် စည်ကားလှသဖြင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဆိုင်ခန်းကြီး ငယ်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချသူများသည် ဝါခေါင်လဆန်းမှစ၍ ရောက်ရှိလေ့ရှိကာ မတ္တရာနယ်ရှိ အုန်း၊ ငှက်ပျောခြံရှင်များမှ တောင်ပြုန်းပွဲတော်တွင် တိုက်ရိုက်လာရောက် ရောင်းချသူများနှင့် တစ်ဆင့် ဖောက်သည်ယူ ရောင်းသူများလည်း ရှိကြသည်၏။ အရောင်းရဆုံး ငှက်ပျောအမျိုး အစားမှာ ရိုးရာအရ ဖီးကြမ်းနှင့် ငှက်ပျောချဉ်များ ဖြစ်သည်။ တောင်ပြုန်းလက်ဆောင်အဖြစ် ထင်ရှားသော ကရေကရာ၊ စလူမုန့် စသော အညာမုန့်များကို စစ်ကိုင်းနယ်မှ လာရောက်ရောင်းချပြီး တောင်ပြုန်း ဆွဲကြိုး၊ လက်ကောက်များကို မြောက်ဥက္ကလာပမှ ထုတ်လုပ်ရောင်းချ ကြပါသည်။
အချို့သော နတ်ကတော်များမှာ အဓိကနတ်နန်းတွင် ပါဝင်ကပြခွင့် မရကြပေ။
စာရေးဆရာ မဲလ်ဖော့ စပိုင်းရိုက ၎င်း၏ Burmese Supernaturalism စာအုပ်တွင် ဗျတ်ဝိ၊ ဗျတ္တကို အေဘရာဟမ်းနှင့် အီဘရာဟမ်း ဟူ၍ မွတ်ဆလင်အမည် ဖော်ပြထားသည်။
အချို့သော သတင်းရင်းမြစ်များတွင် ဤပွဲကို ပွဲတော်အစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမရှိပေ။
ရုပ်တုများရွှေချသည့် ရွှေဘုံဆင်းပွဲကို ပွဲတော်အစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းခြင်းမပြုကြသော်လည်း ရိုးရာဓလေ့ဆောင်ရွက်မှုအဆင့်၏ အပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်၏။ ပွဲတော်အစီအစဉ်တွင် ဤပွဲကို ထည့်သွင်းရေတွက်ပါက ပွံတော်ကြာချိန်မှာ (၉)ရက်တာဖြစ်သည်။
'Burma at the turn of the twenty-first century' စာအုပ်တွင် အမယ်အို ဟူ၍ ရေးသားထားသည်။
'Burma at the turn of the twenty-first century' စာအုပ်တွင် လဆန်း (၁၄)ရက်ဟုဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာဘာသာစကားကော်မရှင်က ထိမ်ပင်ကို Nauclea parviflora အဖြစ် ပြဆိုထားသည်။
ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတို့ရဲ့ပွဲတော်တောင်ပြုံး (in my) (16 August 2013)။
Taungbyon Spirit Festival။
Google map of Kuthodaw pagoda situated in the north of Mandalay to Taungbyone Railway station
Skidmore 2005, p. 65.
မတ္တရာမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး။
Skidmore 2005, p. 71.
Spiro 1996, pp. 118-119.
Skidmore 2005, pp. 71-76.
Pe Maung Tin & Gordon H Luce (1923)။ Glass Palace Chronicle (first Ed.)။ Oxford University Press။ pp. 77–84။
Spiro 1996, p. 116.
Spiro 1996, p. 113.
Shwe Mann Maung။ The Taung Byone Nat Festival။ Perspective (August 1997)။ 17 July 2004 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-09-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Spiro 1996, pp. 113-115.
Phyo Wai Kyaw (27 July 2016)။ တောင်ပြုန်းပွဲ ဩဂုတ်လဆန်း စတင်မည်။ (in my)။
တောင်ပြုန်းပွဲတော် ပခန်းမင်းပို့နေ့တွင် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ လာရောက်သူများဖြင့် စည်ကား (in my) (15 August 2019)။
Spiro 1996, p. 121.
Skidmore 2005, p. 78.
Skidmore 2005, pp. 80-82.
Phyo Wai Kyaw။ "တောင်ပြုန်းပွဲ၏ အစည်ကားဆုံး ချိုးရေတော်သုံး အခမ်းအနားကျင်းပ" (in my)၊ The Myanmar Times၊ 12 August 2019။
Skidmore 2005, p. 82.
Spiro 1996, p. 124.
Spiro 1996, p. 125.
The definition of 'Htein' can be found in the Myanmar Wiktionary referencing Myanmar language commission (1993)
Skidmore 2005, pp. 83-84.
Skidmore 2005, pp. 71-75.